PressReader - Ilanga: 2018-11-22 - INSIKA
EMANDULO kwakunezimfundiso ezinikezwa abantu ngokwezigaba zabo zokukhula ukuze baqeqesheke ngokuziphatha kuleso naleso sigaba abasuke bezongena kusona.
Bezisiza kakhulu lezi zimfundiso ngoba bezilekelela abazali ekukhuliseni nasekuqeqesheni izingane bengebodwa, kukhona ababambisene nabo, okungamalungu omphakathi nangabaholi.
Nokho ngokuhamba kwesikhathi izinto zishintshile, zanyamalala izigcawu namaqembu okulekelela ekukhulisweni kwezingane.
Lokhu kushoda kokusizakala kwabazali ekukhulisweni kwezingane, kubukeka kunomthelela omubi ngoba umzali eyedwa kuba khona izinto anamahloni okuzikhuluma nengane yakhe.
Uye abe nethemba lokuthi uma ihlangene nabanye asebekhulile kunayo, njengamaqhikiza emantombazaneni noma izinsizwa ebafaneni, kuningi engakucosha okungayihlomisa ekubeni iziphathe kanjani.
Baningi abazali abakuthola kunzima ukuyala izingane zabo ngoba bamane bangazi ukuthi kambe yini okumele bayisho noma bangayisho kuzona.
Ngokubona kwami, emuva kokuba umzali eseyifundisile ingane yakhe mayelana nenhlonipho okumele iziphathe ngayo, kumele iyidlulisele nakwabanye kungakhathalekile noma badala noma bancane ngokweminyaka, kuhle ake agxile nasekutheni yiziphi izigaba zokukhula ingane edlula kuzona.
Kumele agxile nasekutheni kumele ilindele luphi ushintsho olubonakala emzimbeni wayo noluzwakala emizweni. Lokhu kuyamsiza umzali ekubeni ingane imethembe ukuthi uyakwazi ukukhuluma nayo nganoma yini ethinta impilo.
Ngaphezu kwalolu shintsho ingane ezolubona, kumele umzali aphinde ayihlomise ngokuthi imizwa efana nokuba nenkani nokuzazi, ungasafuni ukulalela muntu, yona izikhuza kanjani ukuze ibe ngumuntu oqotho.
Okunye okumele abazali banga- kushiyi ezimfundisweni zabo zokukhulisa izingane, wukuthi bayitshele nangobungozi nobuhle babangani, nokuthi kungani kubalulekile ukukhetha abangani abenza izinto ezifuze lezi ozenzayo.
Kuwumsebenzi wabo futhi abazali ukwazisa izingane zabo ukuthi bona kabanawo amandla okuzikhethela abangani, kodwa bakugcizelele ukuthi uhlobo lwabangani luxoxa indaba ende ngayo (ingane).
Yingakho abahlakaniphile bethi ikusasa lakho libonakala ngohlobo lwabangani ophila nabo.
Yingakho umzali ethi uma ebona abangani bengane yakhe, kumane kufike ukuthi okusho ukuthi nengane yakhe iphila le mpilo abayiphilayo esikhathini esiningi futhi kusho ukuthi nayo ihamba lezi zindlela ezihanjwa yibona.
Konke lokhu kumele umzali akukhulume nengane yakhe kukuhle nje, kungakonakali lutho. Bavamile abazali ukuziba izinto bangazikhulumi ezinganeni, bese kuthi uma ingane isiyonile, kube yila umzali ezama ukuyinika iziyalo esehlanganisa nokudinwa noma ukuphoxeka ingane esingene kukhona.
Imvamisa izimfundiso ezifakwa sekonakele kazimsizi umntwana, zimane zimdide kakhulu ingqondo.
Ngikhuthaza ukuba abazali babe nobudlelwano obuvulelekile nezingane zabo, bangalindeli ukuba kube wumhlaba obafundisela zona. Uthando nokunakekelwa ingane ekuthola kubo, kuyinika isisekelo sempilo esihle kunokuba ize iyozifunela lolo thando nemfudumalo kubangani nasemphakathini ongase uyilimaze.
Bazali sinenselelo yokuthanda nokukhulisa izingane zethu ngobuqotho, singanikeli ngazo kuleli zwe sibe singazihlomisile ngolwazi olwanele.
Makhosi Ndleleni uMaZulu wakwaZondo. Insika (isigodlo) UThishanhloko waseMatatane Secondary School [email protected] Utholakala ku: 082 752 7342